I-Villa Yengadi Enhle, Igugu Elifihliwe Elihle Kakhulu
(324 okushiwo abanye)
Columbus, Ohio, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Simon
I-oasis edolobheni eyindawo ekahle yokubalekela wena nozakwenu. Isakhiwo esizimele sodwa ngaphakathi kwehektha elingu-3/4 lengadi yangasese. Ukuzihlola ngokwakho, i-HVAC ezimele, futhi kuhlanzeke ngendlela emangalisayo. Ukuzizwisa kwe-AirBNB okuphambili nokwangempela kukhethwe ababungazi abanakekelayo endaweni enhle, ezungezwe indawo ethokozisayo nokuthula.
I-villa enhle, ethule eyakhelwe engadini yangasese ephefumulelwe yi-Europe. Indawo yokuhlala eyingqayizivele etholakala eNorthwest suburb ye-Columbus. Ifinyeleleka phakathi nendawo ku-I-270 kanye ne-SR. 315, imizuzu nje kude nokuthenga, yokudlela nokuzijabulisa.
Uzobe uhlala ku-475 sqf. i-villa emile, eyakhiwe ngokwezifiso, kanye nefenisha yesimanje nezinto zikanokusho eziklanyelwe ukuhlalisa abantu abadala ababili ngokunethezeka. I-villa yakho ihlinzeka ngokuthula nokuthula phakathi kwendawo yethu enempilo futhi elula, enezindawo zokupaka eziphephile nezimahhala. Kuyikhaya elikude nasekhaya - indawo yokwamukela nokuphumula ukuze ujabulele ngempela futhi uphumule kuzo zonke izinkathi zonyaka.
I-HDTV engu-48" ene- I-Amazon Prime Video, Fire TV, I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.95(324 okushiwo abanye)
Imizuzu emi-3 ukuya entshonalanga kuya ku-Whole Foods, iTrader Joe's, amamuvi, izindawo zokudlela, nezitolo ezinkulu; imizuzu emihlanu ukuya esifundeni saseDublin Bridge. Imizuzu engu-7 ukuya empumalanga ukuya edolobheni laseWorthington ukuthola izitolo ze-boutique eziyingqayizivele nama-bistros. Imizuzu eyi-15 ukusuka ekhempasini ye-OSU, imizuzu engama-20 ukusuka edolobheni laseColumbus. Imizuzu eyi-15 ukuya e-Easton Town Center kanye nePolaris Fashion Place. Imizuzu engu-7 ukuya e-Ohio State University Airport (OSU), imizuzu engu-25 ukusuka eJohn Glenn International Airport (CMH). Imayela elingu-1.5 ukuya esiteshini se-Tesla Supercharging.
Umsingathi wakho uyatholakala ukuze akusize ngemibuzo yakho mayelana nokuhlala kwakho.